China Eco-Enyi na Enyi White kpara akwa Nonwoven eburu Shozụ ahịa akpa na Akara Manufacturer na Supplier | Zhihongda
Eco-Enyi na Enyi White kpara akwa Nonwoven ebu Shopping Bag na Logo
Akpa ndị a na-ahụkarị bụ ndị a na-ewu ewu na afọ ndị a na gburugburu ebe obibi nke sitere na 100% recyclable na reusable materials.These akpa a bụ nke 40-120 gram na-abụghị kpara polypropylene ihe na-eme ka ọ dịrị ha mfe iburu ibu.
1. Non kpara akpa na-na-ewu ewu ndị a afọ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi nke mere si 100% recyclable na reusable materials.These akpa ka 40-120 gram na-abụghị kpara anwụ anwụ Polypropylene ihe na-eme ka ha mfe ibu arọ.
2. Anyị Omenala Popular Non-kpara Tote akpa bụ nke mbụ na klas echekwa oke ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji gosipụta gị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe omume logo na akpa ndị a n'ihi na kwesịrị ekwesị mbọn. Ha sara mbara ma nwee ike ijide oke nchekwa maka ihe na-enye ego n'ahịa na azụmaahịa. Ha nwere ike ịmịnye ndị ọbịa gị ngwa ngwa ebe ọ bụ na ha na-enye ọtụtụ ohere na njikwa nwere ike iburu ibu.
3. Anyị nwere ike bipụta gị bu n'obi logos na aghụghọ na nnukwu akara ebe ndị a ebughibu imewe reusable akpa.
4.Various ahaziri size, obere, ọkara, nnukwu, mmezi nnukwu izute dị iche iche ahịa ina
Aha ngwaahịa Eco-Enyi na Enyi White kpara akwa Nonwoven ebu Shopping Bag na Logo
N'ime akpa a na-akpa akwa, anyị nwere ike ịme larịị, na ala, n'akụkụ, na ụdọ, ma nwekwuo ya dị ka ahaziri.
4. Akwa Họrọ
(1) E nwere dị iche iche ákwà ọkpụrụkpụ, anyị nwere ike inye 40g-120g;
(2) Anyị na-ekwe nkwa na anyị ga-eji naanị ihe ọhụụ;
5.Color maka akparaghị akpa
(1) Silk Printing: Ọ bụ uwe maka mfe otu agba logo, dị ọnụ ala karịa na-eri niile ebi akwụkwọ usoro;
(2) Digital Priting: ọ bụ maka multi-agba logo, ọ ka mma maka ngụkọta akpa ebipụta;
(3) Kwes Nyefee / Okpomọkụ Nyefee Printing, ọ bụ n'ihi doro anya ụkpụrụ yi, ma ndị na-eri bụ ọnụ a otutu
(4) Lamination Printing dị mma maka agba mara mma, ma nwekwuo ike
7.More Filiks maka Non kpara akpa
Showlọ Ngosipụta Ngwaahịa
N'ihi usoro njikwa ezigbo mma, anyị guzobere usoro ọkọnọ nke na-eme ka ndị ahịa nweta ngwongwo ha nke ọma, n'ụzọ ziri ezi, na ugbu a na oge. Iji mee ka usoro ahụ dị mfe na nkasi obi ndị ahịa bụ nzube anyị kachasị mma nke ọrụ!
Q: you bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa?
A: Anyị bụ ndị na-emepụta na China tọrọ ntọala na 2013 na 3 ogbako, 8 R&D pesonel na 80 ọrụ mkpara
A: Polyesler.Nylon, Colton.Poty cotton.Canvas, Lamnated colton, Laminated p kpara, Laminated non kpara, Non kpara, PP kpara.PET non kpara,
Q: you na-anabata OEM?
A: Ee .OEM / ODM dị
A: OEM nlele oge: 3-5 ụbọchị; Mmepụta Mass: 10-20days
A: a. Ajuju --- Ihe omuma zuru oke nke ị nyere, ka ezi ahia na onu ahia anyi nwere ike inye gi.
b. Nkwupụta - Ezi uche kwuru na nkọwa doro anya, dị ka obosara, ogologo, ibu, ojiji, oke
d. T / T dị elu, enwere ike ịkwụ ụgwọ tupu ebufe ya.
e. Mmepụta --- Mass Production.
f. Mbupu --- Site n'oké osimiri, ikuku ma ọ bụ ozi. Zuru ezu foto nke ngwugwu nwere ike nyere.
Omenala Logo ịchọ mma Packaging Mee Up Bag ịkwanyere ịchọ mma Bag Na mkpọchi uwe
A: Ọ bụrụ na anyị ejiri nlezianya kwenye na mmejọ nke anyị.anyị ga-ajụ gị ma ị masịrị otu nkwụghachi ụgwọ ma ọ bụ akpa mgbakwunye ọzọ.
Ọ bụrụ na achọpụtara mkpesa gị dị ka ihe ziri ezi, anyị ga-eso gị rụzie okwu ahụ ngwa ngwa
elu-edu dijitalụ-ebi akwụkwọ owu Tote akpa oghere shopping kwaaji Tote Na Printing Logo
Nke gara aga: E biri ebi recyclable ákwà eze-acha anụnụ anụnụ na-abụghị kpara shopping akpa na logo
Osote: Nkwado eyi reusable Eco-enyi na enyi Advertising Tote Red Non kpara Shopping Bag
Omenala logo ebipụta ụlọ ahịa eco reusable gree ...
Eco Enyi na Enyi na ịkpakọba reusable Non-kpara nri ...
Omenala logo biri ebi reusable oroma na-abụghị kpara t ...